RAMALLAH — Madaxweynaha Falastiin, Mahmoud Abbas ayaa axaddii la dhigay isbital ku yaalla Daanta Galbeed, sida ay sheegeen dhaqaatiirta iyo saraakiisha Falastiiniyiinta, kuwaas oo sidoo kale warar is khilaafsan ka sheegay xaaladdiisa.
Waa markii saddexaad oo Abbas, oo 82 jir ah, isbital la dhig, muddo toddobaad ka yar.
Abbas ayaa qallin yar looga sameeyey dhegta talaadadii, hase yeeshee waxa uu mar kale dib ugu laabtay isbitalka Al-Istishari ee maagalada Ramallah habeenkii sabtida, sida ay sheegtay wakaaldda wararka Falastiin ee Wafa.
Mar kale ayaa haddana loola cararay isbitalka xilli dambe oo ahayd axaddii shalay, ayada oo dhaqaatiirtana ay sheegeen inuu marayo tijaabooyin caafimaad.
Dr. Saed al-Sarahneh, oo ka tirsan isbitalka, ayaa sheegay in Abbas uu marayo tijaabooyin caafimaad kadib markii qalliin loogu sameeyey dhegta, saddex maalmood ka hor.
Si kastaba, ilo-wareedyo kale ayaa sheegay in isbitalka shalay la dhigay aysan la xiriirin qalliinka looga sameeyey dhegta, balse uu ka xanuunsanayo xabadka.
Ururka xoreynta reer Falastiin ee PLO, ee Abbas uu madaxda ka yahay, ayaa sheegay in madaxa wada-xaajoodka Falastiin, Saeb Erekat uu booqday Abbas, islamarkaana ay xaaladdiisa wanaagsan tahay.
Abbas ayaa la filayaa in maanta ama berri uu isbitalka kasoo baxo.
QM oo ka walaacsan Xiisadda u dhaxeysa Syria iyo Israel
Caalamka 11.02.2018. 09:36